Bogga ugu weyn 30 Barnaamijyo Dakhli oo Dadban si Lacag Loogu Sameeyo Intaad Joogto | 2022
Barnaamijyada Dakhliga Dadban ee ugu Fiican
#30. Hoos u dhig
#27. App Panel
#26. Sahanka Junkie
#24. Ipsos i-Dheh
#23. Hubinta 51
#18. Muujinta fekerka
#14. Warbaahinta Gudaha
#13. Socod yar
#10. Gudida Warbaahinta
#6. Abaalmarinta Dosh
#5. Abaalmarinta keen
#3. Dheeraad ah
# 1. Udemy
Waxaad igu raaci kartaa aniga in hal hab oo weyn oo lagu hagaajin karo dhaqaalahaaga ay tahay inaad kasbato Dakhliga dadban. Dhab ahaantii, abuurista dakhli dadban kiisaska intooda badan waxay u baahan tahay maalgelin hore iyo barbaarin badan bilowga laakiin, leh Barnaamijyada dakhliga dadban, waxaad lacag ku kasbataa intaad huruddo.
In kasta oo barnaamijyada dakhliga dadban aysan kaa dhigi doonin hodan habeen, waxay kaa caawin kartaa kordhinta kaydkaaga, bixinta deynta, maalgelinta fasaxa, iyo hagaajinta dhaqaalahaaga.
Waxaa jira barnaamijyo dakhli dadban oo kala duwan oo aad soo dejisan karto si aad lacag u samayso; Waxaan ku soo uruurinay 30-ka sare ee maqaalkan.
Dakhliga dadban waa lacag u baahan dadaal yar si loo kasbado loona ilaaliyo. Tan waxaa ku jira iibinta alaabta, sida barnaamijyada ama buugaagta.
Aad bay u sahlan tahay in maalmahan la helo dakhli dadban. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa casriga. Haddii aaladdaadu ku saleysan tahay macruufka ama aaladda Android, waxaad lacag ku samayn kartaa taleefankaaga iyo barnaamijyada BILAASH ah ee aad ku rakibtay.
Hoos waxaa ah 30 dakhli dadban oo dadban oo kuu oggolaanaya inaad si dadban u kasbato. Barnaamijyadani waxay bixiyaan hab dhammaystiran oo sharci ah oo lacag lagu kasbado.
Waxay ka kooban yihiin sahanno lacag-bixin ah, kasbasho lacag-celin ah, dhammaystirka shaqooyinka fudud, maalgelinta barnaamijyada ilaa kaashka, iyo barnaamijyada ganacsiga dhinac. Barnaamijyadan, waxaad si fudud lacag uga samayn kartaa taleefannada gacanta.
Dhacdaa waa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican app si lacag loo sameeyo. Waa bilaash waxayna kugu abaal-gudaysaa wax-ka-iibsashada noocyada aad ugu jeceshahay. Waxaad helaysaa dhibco marka aad wax soo iibsanayso kuwaas oo lagu soo furan karo kaadhadhka hadyada.
Swagbucks waa dakhli dadban oo weyn app kaas oo siiya dadka isticmaala dhibcaha abaalmarinta si ay u qabtaan hawlo fudud oo onlayn ah. Waxaad ku kasban kartaa barnaamijkan adoo baaraya shabakadda, daawashada fiidiyowyada, iyo dhammaystirka sahaminta.
Si rasmi ah Ebates, Rakuten waa barnaamij kale oo weyn oo loogu talagalay dakhliga dadban. Waxaad kaydin kartaa ilaa 40% marka aad wax ku iibsanayso internetka barnaamijkan. Rakuten waxay iskaashi la leedahay in ka badan 750 dukaan oo ku yaal Kanada iyo 2,000+ gudaha Mareykanka
App Panel wuxuu aruuriyaa xogta suuqa wuxuuna kula socdaa meeshaada taleefankaaga. Waxaad uruurineysaa dhibco si aad wax u qabato wax ka badan rakibidda barnaamijka. Ma aha mid ka mid ah barnaamijyada dakhliga dadban ee ugu mushaharka badan, laakiin waxay noqon kartaa aalad kale oo aad isticmaasho si aad u hesho lacag aad u badan intii aad awooddo shaqo la'aan.
#26. Sahan Junkie
Sahan Junkie waa mid ka mid ah App-ka dakhliga dadban ee ugu sarreeya. App -kan ayaa lacag kaa siinaya wadaagista aragtidaada. Sahan kasta wuxuu u qalmaa tiro dhibcood oo gaar ah, oo aad ku iibsan karto lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda.
TopCashback waa mid ka mid ah goobaha lacag -bixinta ugu deeqsiga badan Ameerika. Markaad wax ka iibsato tafaariiqle ka muuqda TopCashback, tafaariiqluhu wuxuu siin doonaa guddi kuu diraya mareegtooda. TopCashback ayaa kula wadaagaysa guddigaas.
Tani waa wax weyn app taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad qaaddo sahanno u gaar ah mobilada, oo aad kasbato abaalmarin waqti kasta. Waxaad wadaagtaa fikradahaaga waxaadna kasbataa abaalmarino hadhow lagu soo ceshan karo lacag ahaan iyada oo loo marayo PayPal.
#23. Bixinta 51
Isugeynta 51 waa app u fiican dakhliga dadban. App -kan wuxuu bixiyaa lacag -celin toddobaadle ah oo ku saabsan raashinka iyo iibsashada kale ee qoyska ee dukaan kasta. Waxaad kasban kartaa ilaa 35% qiimaha iibsigaaga.
Haddii aadan garanayn waxaad samayn lahayd wakhtiga firaaqadaada, ku biir Instacart oo lacag samee. Waxaa lagu siinayaa lacag aad ku iibsato adiga oo wakiil ka ah macmiilka waxaadna alaabtaada u gayn doontaa albaabkaaga baabuurkaaga. Waxaad samayn kartaa ilaa $ 25/saacad oo lacag -bixinta waxaa la bixiyaa toddobaadle.
Rover waa barnaamij lacag-u-helid ah oo loogu talagalay kuwa jecel xayawaanka. Waxay ku siinaysaa inaad ku socotid eeyaha. Waxaad dejisay jadwalkaaga, qiimaha, iyo nooca xayawaanka aad jeceshahay inaad la shaqeyso.
Haddii aad leedahay guri raaxo leh, waad la xiriiri kartaa Airbnb oo aad kasbato dakhli dadban oo wanaagsan. Waxaad ka kiraysaa gurigaaga dad raadinaya hoy.
Sida Uber oo kale, waxaad lacag ka samayn kartaa Lyft markasta oo aad haysato waqti firaaqo ah. Waxaad iska diiwaangelisaa inaad noqoto darawal, isla markaana ku kasbato dakhliga ku soo gala astaantooda Lyft Express Pay. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa taleefanka iyo helitaanka baabuurka.
Mobilexpression wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku raaxaysato oo aad hesho dakhli dadban. Lacag lagugu siiyo isticmaalka intarneedka miyaanay la yaab ahayn? Waxa aad rakibtay Mobilexpression oo waxa aad helaysaa $5 kaarka hadyada Amazon marka aad ku rakibto muddo 1 todobaad ah. Isticmaalka joogtada ah ee abka waxa uu kaa dhigayaa in aad xaq u yeelato dhibco lagu soo furan karo kaadhadhka hadyada ee bilaashka ah.
KOHO waa xisaab kharash la'aan ah oo leh lacag caddaan ah oo degdeg ah iyo abka maaraynta lacagta looguna talagalay in lagu fududeeyo dhaqaalahaaga gaarka ah. Waa App-ka lacag samaynta oo si heer sare ah loo qiimeeyay oo la socda kaarka Visa-ha dib loo rari karo. Waxaad u isticmaali kartaa app-ka si aad u habayn karto kaydkaaga, iyo sidoo kale aad ku kasbato 0.50% cashback mar kasta oo aad wax ka iibsanayso.
Tangerine waxay ku siisaa khibrad bangi oo wanaagsan oo leh dulsaar aad u weyn. Waxaad ku heli kartaa gunno $ 50 koontadaada kaydka. Kaydkaagu wuxuu ku jiraa caymis ilaa $ 100,000 qayb kasta oo koonto ah.
Warbaahinta Gudaha waa App-ka ugu sareeya ee lagu qiimeeyay kaas oo kuu ogolaanaya inaad hesho ilaa $14 bishii iyo $5 gunno ka dib 12 todobaad. App-kan waxa uu ku siinayaa bil kasta si aad u soo dejiso appkooda si ay u cabbiraan hawlahaaga sida gujinta iyo soo dejinta. Tani waa inay noqotaa abka ugu fudud ee samaynta lacagta.
#13. Socod -socod
Socodku waa nooc jimicsi ah, oo aan jeclayn inuu lacag ku kasbado socod kaliya? Marka laga reebo haddii aad naafo tahay, waxaad ka faa'iideysan kartaa barnaamijka Bitwalking oo aad kasban kartaa dakhli ku meelgaar ah.
Mar kasta oo aad socoto, Socod yar raadraacdo tallaabooyinkaaga oo ku siinaya Doollar hadba inta tallaabo ee aad qaaddo. 10,000 tallaabo waxay u dhigantaa hal Bitwalking Dollar oo labanlaab ah celceliska tillaabada maalinlaha ah ee dadka waaweyn.
Ebates waa ikhtiyaar weyn oo lagu sameeyo dakhli dadban. Waxaad ku kasban kartaa ilaa $ 10 saxiixa iyo 38% gunno ah amaradaada bogagga internetka ee caanka ah sida Amazon iyo Macy's.
Nielsen Mobile waa barnaamij dakhli dadban oo aad u fiican oo kuu oggolaanaya inaad ku kasbato $ 55 wax aanad samayn. Ka sokow inaad si firfircoon uga shaqeyso barnaamijkaaga moobiilka, uma baahnid inaad sameyso wax dheeri ah si aad xaq ugu yeelato dhibcaha gunnada. Si fudud ugu soo dejiso barnaamijka Nielsen aaladdaada oo bilow.
#10. Gudiga Saxaafadda
Kani waa fidinta biraawsarka oo kuu oggolaanaysa inaad kasbato $ 2 asbuucii dakhli dadban adiga oo ku rakibaya Guddiga Warbaahinta Cross laba qalab.
Turo waa suuqa ugu weyn ee baabuurta lagu wadaago. Waxaad lacag ku kasban kartaa adigoo si fudud u kireysta gaarigaaga marka aadan isticmaalin. Waxaad kiraysan kartaa baabuurkaaga wakhti yar ama inta ugu badan ee aad doorato.
Honeygain waa codsi ku habboon oo lacag lagu kasbado khadka tooska ah adiga oo la wadaagaya iskuxirkaaga internetka. Markaad is -qorto, saynisyahannada xogtu waxay adeegsan doonaan shabakadda Honeygain si ay ugu xirmaan internetka. Waxaad ku kasbataa saldhigga xaddiga GB ee aad la wadaagto shabakadda Honeygain.
Ma ogtahay in aad sawirkaaga u beddeli karto lacag? Iyadoo Caws App, waad xayeysiin kartaa oo iibin kartaa sawirradaada. Waxaad ku guuleysan kartaa Boqollaal doollar adiga oo u soo gudbiya sawirro iyo fiidiyowyo mid ka mid ah “ergooyinka” Foap.
Abaalmarinta Dosh waa barnaamij la yaab leh oo ku siinaya lacag -celin aad ku iibsato kaarkaaga deynta ama deynta. Waxa kaliya oo aad sameyneysaa waa isku xirka kaararkaaga barnaamijka.
Kani waa app ku siinaya dhibco kaliya si aad sawir uga qaadato rasiidkaaga. Dukaamaysiga ka dib, waxaad sawir ka qaadataa risiidka adigoon cadayn.
InboxDollars wuxuu u shaqeeyaa sida Swagbuck. Waxaad kasbataa adoo wax ka iibsanaya onlayn, beddelaya mashiinkaaga raadinta. Si aad u hesho dhibco gunno oo dheeri ah waa inaad ka faa'iideysataa dalabyada gaarka ah iyo waxyaabo kaloo badan.
S'more ayaa kugu abaalmarineysa oggolaanshaha xayeysiisyada lagu muujiyo shaashadda qufulkaaga. Haddii aad xiisaynayso waxaad aragto, markaa waad gujin kartaa oo wax badan baran kartaa. Si kastaba ha noqotee, waxaad heli doontaa dhibco xitaa haddii aadan waligaa fiiro gaar ah u siinin xayeysiisyada kaliya furitaanka taleefankaaga sheegashada abaalmarintaada.
Waxaad ku bixin kartaa kaarka hadiyadda Amazon, Tiyaatarka AMC, Applebee, Best Buy, CVS, Domino's Pizza, GameStop, Starbucks, ama Target.
Haddii aad rabto inaad samayso lacag caddaan ah oo dhab ah, tixgeli Koofiyad. Barnaamijkan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku soo ceshato lacag caddaan ah oo dhab ah dukaamaysiga dukaanka iyo khadka tooska ah, daawashada xayeysiisyada fiidiyaha, iyo qaadashada 30-60 sahan. Runtii waa app lacag-sameyn weyn leh.
Haddii aad ku fiican tahay wadaagista fikradaha iyo waxbaridda, waxaad lacag ka samayn kartaa Udemy. Madalkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad abuurto koorsooyin. Haddii aad khabiir ku tahay muusigga, waxaad abuuri kartaa koorsooyin muusig, iibin kartaa oo la wadaagi kartaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka madasha.
Iyada oo ay jiraan in kabadan 50 barnaamij oo halkaas ka jira, waxaa lagu siin karaa lacag aad ku sameyso wax yar ama waxba. Ka faa'iidayso 30 -ka barnaamij ee ugu sarreeya oo kordhi dakhligaaga. Uma baahnid raasumaalka hore si aad u soo dejiso barnaamijyadan.
Dhiganeyaasha vs Doordash: Keebaa Ku Guulaysta Loolanka Bixinta Cuntada?
15 Shaqooyinka Habeenkii Ugu Fiican Oo Bixiya $ 50/Maalin
Sidee DoorDash U Sameysaa Lacag | Qaab Ganacsi Buuxa
Sidee Grubhub Lacag u Sameeyaa? Qaab Ganacsi oo Buuxa
17 Shaqooyinka Tijaabada Ugu Fiican Si Fiican U Bixiya
Sidee DoorDash Lacag U Samaysaa | Qaab Ganacsi oo Buuxa
Wuxuu dhashay Diisambar 18. Melody Raymond waa injineer qalin jabisay iyo Suuq-geynta Dijital ah. Waxay haysataa shahaadada injineernimada korontada machad caan ah. Waxay sidoo kale diblooma ku haysataa Suuq-geynta Dijital ah halkaas oo aan ka helnay shahaadooyin eCommerce, suuq-geynta warbaahinta bulshada, Xayeysiinta Dijital ah, La-tashiga ganacsiga Dijital ah, iyo is-habeynta iyo jiilka taraafikada oo dhammaantood ka socda iskuulka ganacsiga Internet-ka ee Mareykanka. Melody waa qoraa isku kalsoon oo leh xirfado isgaarsiineed oo weyn. Iyadu waa khabiir SEO ah (Naqshadeynta Mashiinka Raadinta) isla markaana hadda ah horumariye Mawduuc ee Teknolojiyada Afrika ee 'Silicon Africa'. Jacaylka ay u qabto Tech-ka iyo hal-abuurnimadu waxay ka dhigtay iyada dhiirrigelinta shaxanka iyo naqshadaha. Riyadeeda ayaa ah inay noqoto mid ka mid ah kuwa ugu sareeya ee Suuqyada Digital ka qaaradda Afrika. Waxay aaminsan tahay shaqada kooxda. Waxay jeceshahay muusigga iyo ciyaaraha sida Chess iyo Scrabble. Waxay ku nastaa daabacadaha dhiirrigelinta ah iyo koob khamri cas.
Dib -u -eegista Guddida Milicsiga Dijital ah 2022: Sharci ama Fadeexad | ma mudan tahay?
10ka Software ee ugu Wanaagsan ee Maaliyadda Shaqsiyeed ee aad isticmaali karto 2022
Tusmada Tusmada Qari 10ka Software ee ugu Wanaagsan ee Maaliyadda Shaqsiyeed ee aad isticmaali karto 20221. DEGDEG2. MINT3.MVELOPES4. TURBOTAX5. BANKTREE6.…
Jadwalka Mawduucyada Qari WAA CASH APP LOOGU TALAGALAY VENMO